Idayinaso kaGoogle Chrome ifika ikwimo yomdlalo kuGoogle Play | Iindaba zeGajethi
Ngexesha elithile elidlulileyo uGoogle wayecinga ukuba kufuneka sinikele elo xesha kwinto apho iGoogle Chrome ishiywe ngaphandle konxibelelwano lwenethiwekhi. Ukwenza oku wavula umdlalo ongapheliyo apho ngokucinezela ibar yendawo okanye ucofe kwiscreen esinika ubomi kuso idayinaso ekufuneka siphephe kuyo imiqobo emininzi eya kuvela.
Umdlalo awuqhubeli phambili, kodwa uyasivumela ukuba sibe nexesha elimnandi ngelixa silinde ukubuya kwe-Intanethi. Nangona kunjalo, ukuthandwa kwalo mdlalo kunye nedayinaso kufuneka kube phezulu kwaye ngoku iyenzile ukufika kuGoogle Play ngohlobo lomdlalo esinokuwudlala nokuba sinonxibelelwano lwe-Intanethi okanye hayi.
Ngegama Dino yokutsiba I-Jelly Bean ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kwivenkile yesicelo esemthethweni, ineentengiso kunye nokusebenza kwi-Android 4.1 Jelly Bean, ukuze ukonwabele ngokulula lo mdlalo ulula kodwa umlutha phantse kuso nasiphi na isixhobo.
Kananjalo abo bakhe badlala kunye nomdlalo osinika wona iGoogle Chrome Uya kufumana umohluko othembekileyo kwaye ezo dinosaurs zinezakhono ezahlukeneyo zongezwa, ukukwazi ukubaleka ngokukhawuleza, ukuxhuma okanye ukugoba. Kufuneka siqokelele iingqekembe ezininzi kangangoko sinakho kwaye sonwabele iimeko ezahlukeneyo eziphinda zenze iindawo ezahlukileyo ezihlala eMhlabeni.
Unokuzikhuphelela i-Dumping Dino mahala kule linki ilandelayo;
Ngaba ukulungele ukonwabela idinosaur eyaziwayo kaGoogle Chrome kumdlalo weDumping Dino?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Idayinaso yeGoogle Chrome ifika ikwimo yomdlalo kuGoogle Play